Umthandazo kuMoya oyiNgcwele ucele uncedo Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Omnye Umthandazo kuMoya oyiNgcwele ucele uncedo Sisiko elenziwa ukuze kusekwe unxibelelwano olunzulu ngokwasemzimbeni, kunye nomgangatho ophakamileyo osekwe kwindiza engaphaya komhlaba.
1 Umthandazo kuMoya oyiNgcwele ucela uncedo: Uyintoni umthandazo kwaye uyintoni uMoya oyiNgcwele?
2 Umthandazo wekholwa kuMoya oyiNgcwele ucela uncedo
3 Umthandazo kuMoya oyiNgcwele woncedo
4 Ukukholelwa kukwenza
La Umthandazo kuMoya oyiNgcwele woncedo: Uyintoni umthandazo kwaye uyintoni uMoya oyiNgcwele?
Kumntu okholwayo umzuzu womthandazo ubalulekile kwaye ungcwele, lonke ukholo kunye nenkolelo yokuba umntu unento, ibonakaliswa ngamandla, imithandazo kunye nethemba elinikezelweyo kwindawo ethi, ngaphandle kokuyibona, yazi ukuba ikhona. Umthandazo unokwenziwa nangaliphi na ixesha, kuba umela umnqweno wokuviwa ukuba umntu okholwayo unawo.
UMoya oyiNgcwele uyinxalenye kaBathathu Emnye oyiNgcwele kunye noYise (uThixo) kunye nonyana (uYesu Krestu), ophethe ubuthixo obufanayo nezinye iindawo zikaBathathu Emnye oyiNgcwele. Umoya oyingcwele uchazwa njengomoya ovusa ukholo lobuKristu emhlabeni.
Bakho abambalwa abakholwayo abathandazayo phambi kwezinto ezintathu ezenza uBathathu Emnye oyiNgcwele ngenxa yokuphakama kunye nobuthixo obungaphaya kokuqonda okufayo. Kukho ukunikezelwa okuninzi ngomthandazo kuMoya oyiNgcwele, umcela impilo, impumelelo, ubukrelekrele kunye nemimangaliso.
La Umthandazo wekholwa kuMoya oyiNgcwele ucela uncedo
Njengoko kusaziwa, ubomi benziwa ngamava kunye neemeko ezichaza ubukho kwaye zimncede kulwakhiwo lwemihla ngemihla. Amanye amava ayanelisa kwaye anomvuzo, amanye abuhlungu kwaye anzima. Iimeko ezixinzelelekileyo nezomeleleyo zezo zenza ukuba umntu azive ecinezelekile, esoyika, okanye ngandlela thile engonwabisi kwimeko yakhe. Kule meko, abantu bafuna indawo yokusabela okanye inzolo ngandlela thile.
Nanku kuza ifayile ye- Umthandazo kuMoya oyiNgcwele ucele uncedo, kuba abanye abantu bafumana indawo yokusabela kunye noxolo kwinkolo. Ngale ndlela, bavakalisa imithandazo yabo kuMoya oyiNgcwele ngokubanzi becela uncedo kwiimeko ezinzima nezomeleleyo. Akukho ndlela ifanelekileyo yokwenza umthandazo kuba kukho amawaka eendlela zokuwucacisa kunye namawaka eenjongo zokucela uncedo okanye inkxaso, eyona nto ifunekayo kumarhamente kukuba nokholo kwaye ukholwe.
Xa ukhupha ondikhonza uMoya oyiNgcwele ndicela uncedo, ithemba lifakwa lokuba isiganeko siza kuphucula okanye senzeke. Umoya ugxile kubume boMoya oyiNgcwele kwaye umsebenzi ofunekayo uyacelwa ukuba uphucule imeko yangoku. Ihlabathi Ingakhuthazwa lukholo njengoko sesinye sezona zipho zinamandla zisuka kumzuzu wokungena kwakho emhlabeni. Unokuba nomdla Umthandazo oya kuSanta Barbara.
La oisibonelelo kuMoya oyiNgcwele sicela uncedo
Nangona kusithiwa akukho ndlela ifanelekileyo, nanku umzekelo thandaza kuMoya oyiNgcwele uncedo, Kuyimfuneko kuphela ukuba nokholo kwaye ucengceleze oku kulandelayo:
«Owu uThixo uyasithethelela,
ngoMoya wakho oyiNgcwele. Ndikhala kuwe ndicela uncedo.
Ndithandaza kuwe njengokukhanya nenceba,
nangalo lonke ukholo ndiyakucela ukuba umamele eyam
uxwebhu lwezikhalazo; Ndiyanicenga ngako konke
Ukujongana nawe njengomncedi, njengothixo
inceba, ndincede ndizive ndinoxolo;
Kutheni iimeko ezininzi zifikile
Ubomi bam bokundiphatha kakubi. Umoya othuthuzelayo
Ndicela amandla okundinceda
thandaza wam. Ngenxa yobuninzi bamandla akho,
kwaye inceba yakho indimithisile.
Ewe uphila, ndiyakubuza ukuba ungathuthuzela njani kwaye
silindile, ngenelela kule meko njengoko
Kungenxa yokuba kuwe sifumana eyethu
izicelo, kuba ungumntu oqondayo kwaye
Yiba nethemba lobuthixo, ndikhala kunye
amandla kunye nokuqiniseka ngokupheleleyo ukuba
ngalo mzuzu uyathethelela mna
Bongoza kwaye undithuthuzele.
Isicelo endisenzayo ngentembelo,
kuba ungumntu oneziqu ezithathu. Kwaye uyayiva eyam
Ingxolo. Ukulunga kwakho kubandakanya intliziyo yam, yam
ingqondo, umphefumlo namandla.
Ndikhala kuwe njengomthombo ongapheliyo we
inceba kubakhonzi bakho. Awuthobi
izicelo ezinyanisekileyo, ngaphandle kwabo
Njengoko uthuthuzela, ngokusebenzisa
iimpendulo; Thuthuzela intliziyo yam nomphefumlo wam.
Bamkele ubomi bam ngenceba, iyaphuphuma
Umphefumlo wam wenceba yakho, uxolo lwakho
engenakuphela; nguwe onako
tshintsha ubomi bam bonke nazo zonke iingxaki zam.
Ngenxa yokuba ubabalo lwakho lunditshutshisa kakhulu
indlela. Guqula kweli lizwe uye kum
intlanganiso. Ndinike amandla anje
njengokuba wanika inkosi yam uYesu.
Ndiyakhala kakhulu, kuba
Ndidinga uncedo olukhawulezileyo oluvela kuwe. ndiyakubuza
ngokuba uncede abasweleyo
embindini wokuhamba kwayo.
Ndincede phakathi kweengxaki ezininzi,
ejongene nobomi bam.
Owu Bawo oyiNgcwele, ndiyakhala ndinethemba elipheleleyo,
ukholo kunye nokuzithemba ukuba ulungile
Intliziyo yam iyabongoza
Ndiyakucela, ndicela inceba, kwaye ndicela kunye
iyonke, ukholo, ukuba uzolise lonke uloyiko lwam.
Nceda umkhonzi wakho, kuba ndifuna lakho
amandla kunye nenceba yakho. Owu ndincede ndingene
Rhoqo, kuba ubuthathaka bam
zikhulu kwaye iingxaki zam zinamandla; kodwa
womelele kunayo nayiphi na ingxaki,
awusijongeli phantsi isibongozo
Ke uThixo uya kundinika yonke into
Intliziyo yam iyakulangazelela,
Ndincede. Ukusukela, ndinokholo eNkosini.
Ndibuyela kuwe, oh umoya kaThixo kwaye unike eyam
isicelo, kwangaphambili, ndiyabulela ngayo yonke into
Intliziyo yam, ngenxa yokuba unguMoya olungileyo
indlela entle. Kwaye inceba yakho ikhathaza eyakho
Ndiyakudumisa, kuba ndiqinisekile
ugcwalise isicelo sam, enkosi
ukuba nemfesane kule ntliziyo
Indumiso yamkela kuba ulungile;
Nenceba yakho ingunaphakade.
Ukubaluleka kokukhuthaza isipho sokukholelwa kubalulekile kuba yeyona nto ihambisa umoya, hayi kuphela kwicandelo lenkolo. Kubalulekile ukukholelwa kubuchule bakho kwaye akukho mida yokufezekisa into oyifunayo.